Tandindomin-doza ny ala manga. Afaka mamonjy azy ireo ny revolisiona mangina - Blue Ventures
Tandindomin-doza ny ala manga. Mety hamonjy azy ireo ny revolisiona mangina
Anisan'ny toeram-ponenana manan-danja indrindra eto an-tany ny ala honko. Ireo tontolo iainana manankarena biolojika ireo dia manana anjara toerana lehibe amin'ny fanamafisana ny fivelomana, manohana ny fahasamihafan'ny zavamananaina ary fandrika karbaona mahery vaika - mitahiry karbaona avo enina heny noho ny faritra mitovy amin'ny alan'i Amazonia.
Atahorana anefa izy ireo. Notrandrahana be loatra ho an'ny hazo, saribao ary jono tsy misy fetra, izy ireo no ala haingana indrindra manjavona eto an-tany, amin'ny tahan'ny 1-2% isan-taona. Nandritra ny taonjato lasa, dia nihena 30 ka hatramin’ny 50% eo ho eo ny faritra honko maneran-tany.
Mba hisorohana izany, dia niara-niasa tamin'ireo vondrom-piarahamonina amorontsiraka maneran-tany izahay mba hanampy azy ireo hiaro sy hitantana amin'ny fomba mahomby ny fampiasana ireo 'ala manga' ireo.
Vakio ny lahatsoratra feno ao amin'ny Pioneers Post Eto.
Blue Carbon, Ala manga, Karbôna crédit, honko, Pioneers Post, Tahiry Honko